News 88 Post - Page2of 702 - Nepal"s No.1 News Portal
जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपादेउराली माइकाे दर्शन गरी असार १४ गते मंगलबारकाे राशिफल हेर्नुस्
June 27, 2022 N88LeaveaComment on जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपादेउराली माइकाे दर्शन गरी असार १४ गते मंगलबारकाे राशिफल हेर्नुस्
मेष राशि : आम्दानी उस्तै रहनेछ। ब्यापार ब्यवसाय राम्रो रहनेछ । काममा सहकर्मीहरूले विरोध गर्न सक्छन्। जोखिमपूर्ण र संपार्श्विक कामबाट टाढा रहनुहोस्, धैर्य राख्नुहोस्। चोटपटक र दुर्घटनाको कारणले हानिको सम्भावना छ। स्वास्थ्य कमजोर रहन सक्छ। विवादलाई प्रोत्साहन नगर्नुहोस्। दाजुभाइसँग विवाद हुनसक्छ । वृष राशि : अधिकारीहरू काममा खुसी हुनेछन्। लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू बन्नेछन्। सुख […]
तपाईँको हत्केलामा कतै यस्तो त छैन ? हेर्नुस् है !
June 27, 2022 N88LeaveaComment on तपाईँको हत्केलामा कतै यस्तो त छैन ? हेर्नुस् है !
काठमाडौं । हस्तरेखा शास्त्रमा रेखाहरूद्वारा बनाइएका विशेष आकारहरू र तिनीहरूको जीवनमा पार्ने प्रभावबारे बताइएको छ। हत्केलाको रेखाबाट बनेका यी आकृतिले मानिसको जीवनमा कहिले ठूलो परिवर्तन आउँछ भनेर बताउँछन् । यस्तै एउटा आकृति एमको आकार हो। जब हत्केलामा केही विशेष रेखाहरू एमको आकार बनाउँछन्, तब यो धेरै शुभ मानिन्छ। जसको जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा र भाग्य रेखा आफ्नो […]
यी राशिका लागि आजको अति उत्तम, हेर्नुस् तपाईंकाे राशिफल !
June 26, 2022 N88LeaveaComment on यी राशिका लागि आजको अति उत्तम, हेर्नुस् तपाईंकाे राशिफल !
मेष राशि : पारिवारिक चिन्ता रहिरहनेछ। दुर्घटनाको सम्भावना रहनेछ । शत्रुको भय रहनेछ । कानूनी बाधा हट्नेछ। जीवनसाथीबाट सहयोग मिल्नेछ । व्यापार बढ्नेछ। अधिकारीहरू काममा खुसी हुनेछन्। पुरानो रोगले बाधा निम्त्याउन सक्छ। वृष राशि : रोकिएका काममा गति रहनेछ। घरबाहिर आवश्यक सबै काम पूरा हुनेछन् । अरूको कामको जिम्मेवारी नलिनुहोस्। आफ्नो बोली नियन्त्रण गर्नुहोस्। अपेक्षामा […]
यी दुई राशिका स्वामी हुन् शनिदेव, यी राशिका मानिस हुन्छन् बुद्धिमान र मेहनती
June 26, 2022 N88LeaveaComment on यी दुई राशिका स्वामी हुन् शनिदेव, यी राशिका मानिस हुन्छन् बुद्धिमान र मेहनती
यी राशिका मानिस बुद्धिमान, मेहनती हुन्छन्। कडा परिश्रम गरेर कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्छन् । तिनीहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी जान्नुहोस्। प्रत्येक राशिको कुनै न कुनै ग्रह हुन्छ। आज यहाँ हामी दुई त्यस्ता राशिका बारेमा बताउन गइरहेका छौँ जसको स्वामी ग्रह कर्मदाता शनिदेव हुनुहुन्छ । यी राशिहरु मकर र कुम्भ हुन्। अहिले यी दुबै […]
आजदेखि ललितपुर महानगरका सडकमा पानीपुरी बेच्न नपाइने, यस्ताे छ कारण
June 26, 2022 N88LeaveaComment on आजदेखि ललितपुर महानगरका सडकमा पानीपुरी बेच्न नपाइने, यस्ताे छ कारण
काठमाडौं । आजदेखि ललितपुर महानगरपालिकामा पानीपुरी बेच्न नपाइने भएको छ । महानगरले हैजा फैलिने उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै महानगरभित्रका सडकमा पानीपुरी बेच्न रोक रोक लगाएको हो । महानगरका नगरप्रहरी प्रमुख सीताराम हाछेथुले पानीपुरी बेच्न नपाइने गरी माइकिङ सुरु गरिएको बताए । “पछिल्लो समय उपत्यकामा फैलिरहेको हैजालाई मध्यनजर गर्दै पानीपुरी बेच्न रोक लगाइएको हो । कडाइका […]
यी हुन् आगामी तीन दिन बाढी आउने नौ नदी, सावधान !
June 26, 2022 N88LeaveaComment on यी हुन् आगामी तीन दिन बाढी आउने नौ नदी, सावधान !
काठमाडाैं । मनसुनी वायुको प्रभावले वर्षासँगै आगामी तीन दिन देशका मुख्य नौ नदीमा बाढी आउने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशका मुख्य नौ नदी र तिनका सहायक नदीमा पानीको सहत बढ्ने भएको छ। नारायणी र सहायक नदीहरू त्रिशुली र बुढीगण्डकीमा पानीको सतह अत्यधिक बढ्नसक्ने महाशाखाले जनाएको छ। आइतबार […]